Warshad Sanduuqa Qadada Korontada Shiinaha iyo soosaarayaasha | Cunitaanka
Awood (max) 300W
Cabbir 220 * 127 * 140mm
Cabbirka cabbirka 755X 575X 300mm (16PCS / kartoonka)
Miisaanka saafiga ah 840g
Dhererka xarig koronto 0.75m
1. Isku mid ahaanta heerkulka, hayso dhadhan fiican.
Naqshadeynta gaarka ah ee la casriyeeyay ee kululaynta waxay hubineysaa in cuntadaadu si siman loo kululeeyo, waxaadna weli ku raaxeysan kartaa cuntooyinka dhadhanka wanaagsan ee asalka ah.
2. Isticmaal badan
Sanduuqa qadada korontada waxaa loo kala saari karaa foornada microwave, sanduuqa qadada, kariyaha bariiska korontada ku shaqeeya, foornada shiilan, dheriga maraq lagu kariyo, dheriga buunshada, qaab jirka oo yar yar, sida cuntada ugu fiican xafiiska ama guriga.
3. Heerkulka Nooca kululaynta
Kuma qasmayso uumiga biyaha si ay u bixiso ur ur leh. Kuleylka isku midka ah ee heerkulka wuxuu beddelaa kuleylka degdegga ah ee microwave si loo ilaaliyo qaabdhismeedka nafaqada iyo dhadhanka ugu fiican.
4. Qalabka aluminium ee xoogga sare leh iyo kuleylka kuleylka ku habboon
5. 800ml awood, ka buuxi waxaad waligaa jeceshahay.
Cidhiidhiga hawada oo sarreeya, qufulka ilaalinta labalaabka, wuxuu xiraa daqiiqado kasta oo shil cunno ah.
6. Nidaamka kuleylintu wuu aamusanyahay mana qasna.
Daboolka ayaa ah heerka cuntada ee PC-ga iska caabinta heerkulka sare, safka wuxuu ka samaysan yahay aluminium heerkiisu yahay cuntada dhoobada dhoobada. Tusiyaha iftiinka hoggaanka, si sahlan loo hubiyo xaaladda karinta wakhti kasta.
7. Isdhexgalka 'Magnetic Interface', kululee marka aad furaysid.
Looma baahna inaad saf ku sugto kuleylka microwave, waxaad heli kartaa cunto diiran inta lagu jiro saacadaha shaqada.
8. Waa wax aad u habboon oo la qaadan karo inaad qaadato cuntadaada
Sanduuqaani wuxuu udhaxeeyaa 0.84KG wuxuuna u dhigmaa sanduuqa qadada dhalada ah. Wax walwal ah kama qabin baxsiga markii aad ku rido boorsada gacanta.
9. Si buuxda loo dhaqi karo nadiifinta fudud
Fasalka cuntada sanduuqa dhoobada ah ee gudaha ku jira waa sahlan tahay in la nadiifiyo oo aan dheg dheg lahayn. Waxay qaadataa oo keliya 3mins in la dhaqo.
Hore: Electric Qado Qado Box
Xiga: Dheriga wax lagu karsado oo fara badan
Sanduuqa Qadada Kuleylka Kuleylka Leh
Sanduuqa Qadada Kuleylka Kuleylka
Sanduuqa Qadada Kuleylka ee La Qaadan Karo